एकै खेलामा ७ गोल ? खेल शंकाको घेरामा «
एकै खेलामा ७ गोल ? खेल शंकाको घेरामा
प्रकाशित मिति : 29 January, 2020 2:00 pm
सरस्वतीले एन्फा कम्प्लेक्समा भएको खेलमा हिमालयन शेर्पा क्लबलाई ४–३ ले पराजित गर्दै लिगमा पहिलो जित हात पार्दा खेल शंकाको घेरामा परेको छ। किनकी लिगका सुरुवाती ८ खेलमा सरस्वतीले जम्मा २ गोल मात्र गरेको थियो। तर नवौं खेलमा एकैपटक चार गोल गर्‍यो। अर्कोतर्फ लिगको सर्वाधिक गोल हुने खेल पनि यहि खेल बन्यो।
यसअघि लिगमा ८ खेल खेल्दा २ गोल गरेको सरस्वतीले शेर्पाविरुद्व ४ गोल गर्नुलाई शंकास्पद रुपमा हेरिएको छ । लिगकै बलियो टिम मछिन्द्रलाई पराजित गरेको शेर्पाले ४ गोल खानुलाई पनि मैदानमा उपस्थित दर्शकले पचाउन सकेनन् ।
यस खेललाई मैदान बाहिर हुने मिलेमतो (फिक्सिङ) को रुपमा हेरिएको छ । लिगका केही खेलमा खेलाडी खेलाडीबीचको (बेट) राखिएको शंका गरिएको छ । सोही अनुसार सो खेलमा ७ गोल निस्किएको आशंका छ । खेलमा सरस्वतीले तेस्रो गोल गरेसँगै प्यारापिटमा उपस्थित दर्शकले खेल फिक्सिङको गन्ध पाउन थालिसकेका थिए । उनीहरु भन्दै थिए, सर्वाधिक गोल गर्ने खेल यही हो ।
लिग निर्देशक सञ्जिव मिश्रले पनि खेल शंकास्पद भएको प्रतिक्रिया दिएका छन्। यसको छानविन भिडियो फुटेजको आधारमा इन्ट्रिग्रिटी अफिसरले गर्नेछन्। अनुसन्धानमा दोषी देखिएमा कारबाही हुनेछ।